हार्न जानेका छैनौ, अब पनि हार्दैनौ : उपसभापति राई – Gurkha Army Ex-Servicemen's Organisation GAESO
You Are Here: Home » अन्तर्वार्ता » हार्न जानेका छैनौ, अब पनि हार्दैनौ : उपसभापति राई
Posted by: admin Posted date: February 04, 2013 In: अन्तर्वार्ता | comment : 2
लण्डन । बेलायतमा गोरखा भुतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)को कार्यक्रम र जानकारीसभा तिव्र रुपमा भईरहेको छ । गेसोले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको न्यायिक आन्दोलनलाई सफल पार्न गेसोले आफ्नो अभियानलाई तिव्र पारेको हो ।
बेलायतमा गत एक महिनामा मात्रै करिब एक दर्जन बढी घोषणा सभा र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएकॊ छ । कार्यक्रमहरुमा गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङ उपसभापति एंव बेलायत ईन्चार्ज कृष्णकुमार राई केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर गुरुङ लगायतको सहभागिता थियो । अल्डरसट, हन्स्ल्लो, केन्ट, अश्फोर्ड ,फानबोर्ड लगायतका शहरमा स्थानीय शाखाको आयोजनमा भव्य जानकारी सभा भएको हो । सभालाई सम्बोधन गदै सभापति पदमबहादुर गुरुङ र उपसभापति कृष्णकुमार राईलॆ गेसोको दोस्रो चरणको आन्दोलन र गोरखा स्मारकको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । यसै विच यस सन्दर्भमा गेसोका उपसभापति एवं बेलायत ईन्चार्ज कृष्णकुमार राईसँग गेसो अनलाईनका लागि राजेश राईले अन्तरवार्ता लिनुभएको छ । वार्तामा उपसभापति राईले यो दोस्रो चरणको आन्दोलन जसरी सफल बनाएर छोड्ने दृढता प्रकट गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले हार्न जानेको छैनौ अब पनि हार्दैनौ ।’ प्रस्तुत छ लामो वार्ताको सारसक्षेप :
गेसोले आफ्नो कार्यक्रम बेलायत केन्द्रीत गरेको हो ?
-होईन संसारभरी गेसोको अभियान चलीनैरहेको छ । नेपाल हङकङ मकाउमा पनि गेसोको कार्यक्रम र अभियान उत्तिकै तिव्र रुपमा चलीरहेको छ । गेसोको केन्द्रीय अभियान अन्तर्गत नै बेलायतमा पनि अभियान चलाएका हौं । अहिले ठुलो संख्यामा गोर्खाली समुदाय बेलायतमा बसीरहँनु भएको कारण यहाँका कार्यक्रम भने भव्य हुने गरेको छ । प्रत्येक कार्यक्रमहरुमा सैयौको संख्यामा उत्साहका साथ सहभागी भईरहनु भएको छ ।
पछिल्लो समयमा तपाईहरुले अभियानलाई तिव्र किन पार्नुभएको हो ?
दुई बर्षदेखी बेलायती शासकले गोरखा सैनिकहरुलाई शोषण र बिभेद गदै आएको तथ्य सबैलाई थाहा नै छ । यही अन्याय बिरुद्ध गेसोले दुई दसक अघिदेखी निरन्तर न्यायिक आन्दोलन साचालन गदै आएको छ । यसक्रममा धेरै सफलता हात पारेका छौ । गोरखाहरुलाई दुई बर्षदेखीका अन्याय र शोषणबाट क्रमस मुक्त गरीरहेका छौ र गर्ने क्रममा छौं । यही आन्दोलनको दौरानमा गेसोले अनेक तथ्य र रहस्यहरु फेला पारेका छन् । जुनकी बेलायती शासकले आफ्नो माटो र मुकुटका लागि लडीदिने गोर्खा सैनिकहरुलाई पत्याउनै नसकिने बिभेद र शोसण गरेको तथ्य भेटिएका छन् । अब त्यही तथ्यहरुलाई संसारका सामु सार्बजानिक गरेर लड्ने छौ ।
यस्तो तथ्य कहिले कसरी सार्बजानिक गर्नुहुन्छ ?
हामीले बेलायती शासकले गोर्खाहरु माथि गरेको अन्यायको बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन स्याङजाको फेदीखोला-८ स्थित साल्मेडाँडाँमा रहेको ३ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा गोरखा स्मारक बनाउन लागेक छौं । यो स्मारकमा हाम्रा पूर्खाहरुलाई युद्धमा किन मानवढाल किन बनाईयो कुन-कुन देशमा लगेर कति मारिए कति हराए कति घाईते भए यसरी मारिएका वा घाईतेलाई क्षतिपूर्ति दिईयोकी दिईएन यदि दिएन भने कनि दिईएन गोर्खालीहरुलाई संस्कार र भाषाबिहिन बनाईयो विश्वमा जिम्मेवार हुँ भनेर आफूलाई दाबी गर्ने बेलायतले दुई सय बर्षसम्मको गोर्खालीहरुको सैनिक सेवालाई किन मान्यता दिएन यीनै सवालहरुलाई नेपाली जनता लगायतका विश्वसामु छरलङ्ग पार्नेछौ । र दुई सय बर्षदेखी गोर्खालीहरुले बगाउँदै आएको रगत र पसिना मुल्यको खोजी गर्नेछौ । यो स्मारक विश्वको महत्वपूर्ण र आकर्षक नमुना स्मारक बन्नेछ । हामी यसलाई एसियाको ुईपरु घोषणा गर्नेछौ ।
स्मारक निमार्णमा बेलायतमा बसेका गोर्खाली समुदायको सहयोग कस्तो पाउँनुभएको छ ?
मैले अघि पनि भने हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरुमा सैयौका संख्यामा बेलायतमा रहनुभएका गोर्खा समुदाय सहभागी भईरहनु भएको छ । अर्कातिर गोरखा स्मारक सबै गोर्खालीहरुको गौरवको बिषय हो केवल गेसेको नेतृत्वमा मात्रै निमार्ण हुने हो । तर साथ सहयोग गोर्खाली समुदायबाटै हुने हो । गोरखा स्मारकमा सबै गोर्खालीहरुको स्वामित्व र अपनत्व हुनेछ । गेसोले कस्तो सहयोग पाएको छ भन्ने प्रशङ हुदैन । सबै गोर्खालीहरुको साझा अभियान भएकोले सबै एकजुट भएर लागीरहेका छौं ।
अझ ठोस रुपमा भनीदिनु न गोरखा स्मारक निमार्णमा गोरखा समुदायबाट कस्तो सहयोगको आपेक्षा गर्नुभएको छ ?
मैले अघि पनि पनि भने कस्तो सहयोग भन्ने क्ररै आउँदैन । गोरखा स्मारक सबै गोर्खालीहरुको साँझा गौरवको हुने भएकोले सबै गोर्खालीहरुले सबै खालका सहयोग गर्नुहुनेछ । र सबैको साथ र सहयोग पनि पाईरहेका छौं । यो केवल कृष्णकुमार वा पदमबहादुरको मात्रै बिषय होईन ससारभरका न्याय र मानवअधिकारको पक्षमा रहने जनसमुदायको सरोकार र गौरवको बिषय हो । र सबैले उत्तिकै महत्वका साथ सहयोग पनि गरीरहनु भएको छ । हामी सबै एकदमै उत्साही छौ यो अभियानमा ।
तपाईहरुले एकदमै महत्काङक्षी योजना बनाउँनुभएको छ पुरा होला त ?
पुरा नहुने प्रश्नै आउँदैन । हामीले यसलाई गोरखाहरुको दोस्रो चरणको न्यायिक र सृजनात्मक आन्दोलन भनेका छौं । यसका सबै आन्दोलनहरुमा हामी सफल भएका पनि छौं । जतिसुकै अप्ठ्यारा र अबरोधहरुको बिचमा पनि हामी यो आन्दोलन सफल बनाएर छाड्छौं । हामी गोर्खालीहरुले कहिल्यै हार्न जानेका छैनौ र हार्नका लागि आन्दोलन पनि गदैनौं । अब दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि जसरी भएपनि सफल बनाएर छाड्नेछौं ।
G Gurung (Pokhara)
God bless GURKHA and their famylese.
chhadnu hunna sir haru.yo muk-khaya itihas sang gasiako hunale pani hamro jit chha.ak rati pani chhadnu hun-na jai GAESO thank you